Gịnị bụ Virtual Adị? | Martech Zone
Osooso nke nkà na ụzụ na-eku ume. Ọ bụrụ na ị gaara ajụ m uche m banyere eziokwu dị adị otu afọ gara aga, enwere m ike ịgwa gị na ọ nwere oke ohere na agụmakwụkwọ na ntụrụndụ. Agbanyeghị, dị ka m kwuru na post na-adịbeghị anya mgbe m gachara Dell Technology .wa, seeinghụ mgbanwe mgbanwe dijitalụ nke na-eme n'ụwa na-agbanwe echiche m banyere ihe niile.
Eziokwu Virtual (VR) bụ ahụmahụ miri emi ebe onye ọrụ na-ahụ ihe na ahụ ike nghọta na-edochi anya site na ahụmịhe arụpụtara. Enwere ike ịgbakwunye site na akụrụngwa haptic, isi maka isi, yana enwekwara ike ịkwalite. Ihe mgbaru ọsọ bụ dochie ụwa dị ugbu a ma nwee onye ọrụ kwenyere na ha nọ na nkwekọ mmekọrịta nke ejiri ngwaọrụ ndị a mepụta.
Osooso a na-eme site n'enyemaka nke ọgụgụ isi - usoro nwere ike ịmụta iji mejupụta oghere ndị mmepe ahụ emetụbeghị. M na-akọrọ ihe ịrịba akụkọ ebe McLaren simulations dị nnọọ mma na amụma ndị ndị na-eme ihe ntụgharị ha mere ziri ezi nke na e ji hazie ma dozie ụgbọala ndị na-agba ọsọ. Nke ahụ bụ nnọọ ịtụnanya… mebere eziokwu ịkọ n'ezie eziokwu. Whoa.
Ezigbo nyochara ma mepụta Ọdịdị Virtual ma mepụta ihe ọmụma na-esonụ. Fullestop bụ ọkachamara na ntanetị websaịtị na mmepe n’ụwa niile. Nhazi omenala maka azụmahịa nwere mkpa pụrụ iche. Ihe omuma ahu na enye ebe VR tinyere etinyere ohere ahia ya na nsonaazụ puru iche:
Marriott nyere ndị ọrụ kaadị VR kaadị postkaadị, na-emetụta ọnụọgụgụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ dị ha ka ha nọrọ na ụlọ Marriott karịa.
Ebe British Columbia kere ihe omuma nke VR nke Great Bear Rainforest nke mere ka ndi 5% bawanye.
Thomas Cook nyere VR flyovers nke Manhattan Skyline na - akpata 190% mmụba na njem NYC na 40% laghachi na ntinye ego.
Ọ gaghị akwụsịlata, kwa. Endingkwụ ụgwọ na VR nwere ike iru $ 7 ijeri afọ a n'etiti ngwaike na ngwanrọ ma nwee ike tolite na $ 30 ijeri site na 2020. Enwere isi mmalite VR VR nke Amazon na Oculus Rift gosiri otu nke kacha mma. Anọ m na-ele anya ka nwa m nwanyị jiri usoro Oculus Rift na-egwu ọtụtụ egwuregwu Alienware Mpaghara 51 usoro na ọ bụ mara mma ịtụnanya ịhụ otú ngwa ngwa ọ emers na ahụmahụ.
Lelee infographic nke na-akọwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ohere maka Ezigbo Virtual. Ọ na-atọ ezigbo ụtọ!
Tags: ndị ọbịaEbe ndị ọbịa 51ebe njedebe british columbia vrukwu bekee oke ohia brikechi vrahia vrmarriott vroculus riftthomas esi nri vrvirtual eziokwuvr ahịa